I-Antoinette Suite - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguCari
Ikhaya lam elinomtsalane lesixeko libonelela ngelizwe eliziva livalelwe kumbindi wedolophu yaseScranton. Nokuba uhambo lwakho lolweshishini okanye lololonwabo ndiqinisekile ukuba ikhaya lam liya kuba lelona lifanelekileyo libonelela ngokulala ebusuku kamnandi. Eli khaya kukuhamba imizuzu emi-5 ukuya edolophini eScranton, ukuthenga kunye nokutya. Kwakhona kufutshane iimuvi, iipaki zamanzi, iindawo zembali zaseSteamtown kunye ne-U yaseScranton, iikholeji zasekhaya kunye nezibhedlele ezi-3 ezikhulu. Sibonelela ngentuthuzelo, isitayile esinombono wobomi besixeko kunye nemvakalelo yokwenyani.
Le yindlu yeendwendwe yabucala kwikhaya elincinci elimnandi kwisango ledolophu yaseScranton. Indawo yam ipholile ngokuhlekisa kunye nokuhonjiswa kobugcisa obulula. Ndinendawo yabucala engaphandle endinokonwaba nayo. khaba umva kuphela iivibes ezilungileyo apha! Bonke ubutofotofo bekhaya kwindawo yethu encinci yokubaleka. Ndinepleyiti eshushu, imicrowave kunye netoaster kunye nekofu maker. Ndazise nje into oyifunayo kwaye ndiza kwenza konke okusemandleni am ukubonelela ngeyona ndawo ilungileyo yokuhlala ukuze uphumle umzimba wakho. Ndikwaziva ndikhululekile ukuthatha incwadi ushiye incwadi! kude fr Ndikwabonelela "shiya incwadi thatha incwadi". ukuba awukho ekufundeni ungahlala unxibelelana nomzobi wakho wangaphakathi kwaye upeyinte ilitye ukuze ushiye ngasemva ukuze ezinye iindwendwe zixabise. Ndibonelela ngezinto eziluncedo ukuba umoya wokuyila uyakubetha. Chola ilitye ngasemva kwendlu kwaye ushiye uphawu lwakho! kwakhona ukuba uza noboya bakho baby ndicela undazise xa ubhukisha ukuze ndilungiselele igumbi kakuhle. Ndisebenzisa iilineni ezikhethekileyo kwabo bangezozilwanyana ezifuywayo / abanini-zilo-qabane xa kukho umntu onokuthi alaliswe yimizimba. ukusilela ukwazisa ngezilwanyana kuya kubangela i-10 eyongezelelweyo yeedola. umrhumo. Enkosi ngokuqonda kwakho. Izipho zezilwanyana zamkelekile☮️
4.78 out of 5 stars from 465 reviews
4.78 · Izimvo eziyi-465
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi465
Le yindawo yabucala kwindawo esembindini wedolophu. Kuyamangalisa ukuzola ngasemva ngokuba kwindawo esembindini kodwa hlala ukhumbula ukuba lisango lokuya edolophini ukuze ibe sisitrato esixakekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Cari
Ndingafumaneka ngombhalo okanye ngomnxeba. Zive ukhululekile ukufikelela kum ngayo nayiphi na imibuzo 5703358746